Ilifu leAdobe lokuyila: Funda uPrinta oLungileyo kwiiLayisensi! | Martech Zone
NgoLwesibini, Novemba 7, 2017 Douglas Karr
Xa iAdobe yokuQamba kwamafu yasungulwa, ndasayina! Akusekho kuphinda kuthengwe iilayisensi ezibizayo nokulawula izitshixo zeDVD… khuphela nje kwaye ufake njengoko kufuneka. Sineqela elimangalisayo elisebenza kuyilo lwethu, kodwa sihlala nje kufuneka senze ukuhlela ngokukhawuleza okanye uhlengahlengiso emva kokuba sifumene iifayile kubaqulunqi bethu, ke ndathenga ilayisensi. Umlingane wam oshishino waqala ukunceda, ke ndathenga nelayisensi yesibini, naye. Kwaye omnye wabathengi bethu wayengenalo uhlahlo-lwabiwo mali lwelayisensi kodwa kwakufuneka ahlele iifayile amaxesha ngamaxesha, ke ndibathengele ilayisensi.
Andizange ndifunde ukuPrinta okumnandi
Ndacinga ukuba ndihlawula nje umrhumo welayisensi wanyanga zonke kwaye ndingongeza kwaye ndisuse iilayisensi njengoko kufuneka. Ndifumene indlela enzima ukuba akunjalo. Emva kokuba iqabane lam loshishino lisungule i-arhente yakhe kwaye umxhasi wam evumele umqeshwa ukuba ahambe… Ndizifumene ndibhatalela iilayisensi ezimbini ezingasetyenziswanga inyanga nenyanga. Emva kokukhubeka kwipaneli yolawulo eyoyikekayo yeAdobe yokuQamba kwamafu kunye nokususa abasebenzisi bobabini, ndiye ndaphawula ukuba ukubalwa kwelayisensi kuhlala kunjalo.
Uphendlo olukhawulezayo lwe "susa iilayisensi" kwisiseko sabo solwazi ngaphandle kwempendulo akukho mntu wakhe wafuna… Inkxaso yoNxibelelwano. Ngaphantsi… Ndivule ifestile yencoko. Ndacinga ukuba mhlawumbi umntu uza kuthetha nam ngenxa yokukhubaza iilayisensi. Emva kwemizuzu engama-23 kunye nemizuzwana engama-51, bayenzile. Kodwa isenokungabi sisizathu sokuba ucinge.
Incoko yokwenyani ibandakanyiwe ngentla ukukubonisa ubume obungenantsingiselo endibuphosileyo, obuyityeshele ngokupheleleyo into yokuba ndisebenzisa ilayisensi yam. Ndiyazi ukuba inkulu kangakanani le nkqubo, mna uthenge iphepha-mvume!
Inkampani elingana neAdobe kufuneka inyanisekile isebenzisa esi sicwangciso sokuqhekeza abathengi babo ngamadola ambalwa. Khange ndiqonde ukuba ndingaqondanga ndisayina ikhontrakthi entsha yonyaka. Ndiyaqonda ukuba amanye amashishini aneendleko zokubhabha ezinzima kubathengi, kodwa loo nto ayikho ngeAdobe yokuQamba kwamafu. Njengayo nayiphi na iqonga le-SaaS, kuya kufuneka ndikwazi ukongeza kunye nokususa iilayisensi zomsebenzisi njengoko kufuneka. Isizathu sokuba ndibhalise kukuba ndingumsebenzisi onyanisekileyo olixabisileyo ixabiso leqonga kwaye walihlawula ngokuzithandela.
Ngoku ndihlawula ama-300% endleko zam zelayisensi yeAdobe Creative Suite namanye amaphepha-mvume amabini aleleyo. I-Adobe, ngokuqinisekileyo ndiza kukubiza ngoJulayi 16, 2018. Mhlawumbi lixesha lokuba ndifumane amanye amaqonga.
isilumkiso: Akukho khetho kwipaneli yokulawula ukukhubaza ukuhlaziywa ngokuzenzekelayo.
tags: zodakailifu lokudala le-adobeIndawo yokuyila yeAdobeilayisensi ye-adobeilifu lokudalaIlayisenisi